Wasiir Maareeye oo dacwad ka gudbiyay boqorka beeshiisa kadib markii uu ku been abuurtay (DHAGEYSO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Wasiir Maareeye oo dacwad ka gudbiyay boqorka beeshiisa kadib markii uu ku been abuurtay (DHAGEYSO)
Wasiirka warfaafinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa dacwad kusoo oogay boqorka beeshiisa, kadib markii sida uu sheegay uu sharaftiisa meel uga dhacay.
Wasiir Maareeye oo maanta gaaray xarunta ciidanka dambi baarista ee CID-da ayaa halkaas ka sheegay in isagoo muwaadin caadi ah uu dacwad kusoo oogay boqorkiisa oo uu ku tilmaamay inuu kusoo eedeeyay inuu afduubay Suldaan ka mid ah beesha uu isaga kasoo jeedo.
Wuxuu wasiir Maareeye sheegay in boqorka beeshiisa uu wado amaro uu ku doonayo in looga hor istaago xaqa ay leeyihiin beeshiisa.
Sidoo kale, wasiir Maareeye ayaa sheegay inuu ku dadaali doonno sidii beelaha dega gobolada Waqooyi ay u heli lahaayeen xuquuqdooda ku aadan qeybsiga Aqalada hoose iyo sare ee baarlamaanka Soomaaliya.
Dhinaca kale, wasiir Maareeye ayaa sheegay inuu doonayo in boqorka beeshiisa uu keeno caddeymo muujinaaya inuu isaga afduubtay suldaanka beeshiisa oo lagu magacaabo Suldaan Faarax Maxamuud Maxamed, oo uu haatan ku tilmaamay inuu yahay shaqsi xur ah oo aan marnaba la afduuban.
Ugu dambeyntii, wasiir Maareeye ayaa ku eedeeyay eedeymahaan dhan ee isaga loo jeedinaayo inay ka dambeeyaan maamulo siyaasadeed iyo musharixiin uusan ilaa iyo haatan magacyadooda shaacinin, kuwaas oo uu ku tilmaamay dad doonaya inay sharafkiisa meel uga dhacaan.